Muuri News Network » Xarunta Maxkamada maamulka Gobolka Banaadir oo maanta xariga laga jaray+Sawiro
Xarunta Maxkamada maamulka Gobolka Banaadir oo maanta xariga laga jaray+Sawiro
Sep 10, 2015 - Comments off
Munaasabadii xariga looga jarayay oo ka dhacay Muqdisho ayaa waxaa ka qeyb galay masuuliyiin ka tirsan golaha wasiirada dowlada Federalka Soomaaliya, Taliyaal ciidan, Xeer ilaaliyaha Guud Ee Qaranka ,Guddomiyaha Maxkamada sare, garsoorayaal, wakiilo ka socday beesha caalamka iyo qeybaha ururada bulshada rayidka.
Ugu horeyn ayaa Munaasabada waxaa ka hadlay Xaashi Cilmi Nuur oo ah gudoomiyaha maxkamadda gobolkan banaadir waxana uu sharaxaad kabixiyay qaababka kala duwan oo ay soo mareen shaqooyinkoodii maxkamadda iyo in ay doonayaan in laga raro maxkamadaha ay kamid yihiin tan milatariga loona dhiso xarumahooda.
Sidoo kale Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr Axmed Cali Daahir ayaa ka dalbaday mas’uuliyiintii ka socotay wadamadda deeq bixiya yaasha in ay taageera dheeraad ahi ku bixiyaan dhismaha xarumaha maxkamadaha dalka.
Dhismahaan cusub ayaa waxaa hada ka dib kaliya ku shaqeynaya Maxkamada Gobolka Banaadir.
Wasiirada Cadaalada iyo Wasiirka Amniga oo munaasabada goobjoog ka ahaa ayaa dhankooda Midowga yurub uga mahadceliyey dhismaha ay ku sameeyeen xarunta maanta xariga laga jarey.
Sidoo kale,Xubnaha ka socday Beesha caalamka oo ku sugnaa madasha furitaanka Maxkamada gobolka Banaadir ayaa soo dhaweeyay xarig ka jarida Maxkamada gobolka Banaadir.
Ugu dambeyn Guddoomiyaha Maxkamada Sare dalka Ceydiid Cabdilaahi Ilka Xanaf ayaa sheegay in dowlada iyo bulshada soomaaliyeed uu ka codsanayo in ay ilaaliyaan ixtiraamka garsoorka dalka waxa uuna ku celceliyey in ay xilligan Jirto dhaqaale xumo iyo amni darro haysato garsoorayaasha Soomaaliyeed